By axadle Last updated Jul 24, 2020
Fartuun: Maasha allah waan ka war bogan karaa alle maxaan abaalkaaga ku gudaa aabe ayaa usbuuca xiga imaanayo markuu yimaado ayaan kaaga qadayaa.
Maya looma baahna ka badan ayaan isku leenahay
Sidii ayaa uu 5$ farta kaga saaray oo ay kaarka la aaday Xasan Kaafi oo goobta aan ka fogeyn ayaa u galay markii ay Fartuun baxday markaasuu ku yiri.
Maxay u socotay ma murug kale ayaa ay kuu waday
Saxiibow ninkii ayaa ay war ka ladahay oo mudooyinkaan internet ay kala sheekeyn jirtay ka weysay
Oo adiga maxaad u qaban kartaa
Ugu yaraan in aan ku caawiyo dhaqaalo ay ku wacdo
Oo kaalay reerkooda ayaaba kaa lacag badanee maxaad u caawineysaa sow maaha naag nin kale kaa aaday
Saaxiibow reerkooda oo jooga waxa ay aniga ii soo aaday ayaa jira teeda kale aniga inta aan jaceylkeyga u sheegtay iyada ima diidin ee markaan arkay in qalbigeeda uu qof kale la haayo ayaan u ogolaaday ileyn farxadeeda ayaa ila weyn iminka wax weyn uma baahneyd 5$ oo ay kaar ku gadata ayaan siiyey.
Nooca jaceyl ee ku galay ma aqaan haddii aad jeceshay weli oo aad qalbiga ku heyso waad aragtaa ninkaas uma soo jeedee maad fursada ka faa’ideysatid oo isku sharaxdid jaceylkaaga gacantaada ayaad ku fogeysaa.
Saxiibow ima fahmeysid laakiin maalintuu qalbigaaga si dhab ah qof u jeclaato ayaad I fahmi doontaa
Jaceylkaan qaabka daran ee ku galay illaah ayaan ka magan galay
Waxa aan dareemayo waa jaceyl dhabta in aan iyada waayo waxaa igaga dhib badan in aad fiirsado iyada oo dhib ku jirta mana u quuri wax kasta oo ay jaceylkeeda ku heleyso waan yeelayaa.
Taa qalbigaaga ma ku faraxsan nahay
Qalbigayga waxaa farxad u ah iyada farxadeeda
Jaceyloo xaal qaado haddii jaceylka uu yahay doqonnimadaan illaah ayaan ka baryey inuusan I hor geenin.
Waxaan ahay qof wax jecel ee ha ma ihi qof danteeda uun fiirsata mar hadaan aniga aan farxadeyda waayey ma aha in aan iyada dhibka ugu duceeyo.
Aniga hadalkaaga ma fahmaayo laakiin murugtada lee ha ii sheegin
Farxaan inta uu qoslay ayaa uu yiri
Maalinta uu jaceyl ku galo aan hadalno ka sokena indhaha iga day
Ma yeeli karo saxiiboow waayo ma doonayo adiga oo dhibtoonayo illaahey sida ay qalbigaaga uu jecel yahay ha kuu yeelo saaxiin
Xasan Kaafi fajac ayaa ka soo haray wuuna la yaabanaa sida uu saxiibkii uu jaceylka u weeraray iyo go’aan qadashada la’aanta ku timid isaga oo weli amakaagsan ayaa uu iska baxay.
Fartuun iyada oo la dhacsan sida ay xilli kasta uu Farxaan ugu heelan yahay uguna saacido jaceylkeeda ayaa ay soo iibsatay kaarkii ay ku hadli laheyd guriga oo cidla inta ay heshay ayaa ay durbadiiba ku shubatay oo numberkii Ayaanle la booday markii uu in cabaar ah dhacay ayaa uu Ayaanle qabtay isaga oo iska garanayo in ay Fartuun tahay kana xun in waqtigiisa ay dhumisa maadaama uu geerish uu ku jiray ayaa uu yiri.
Haa Ayaanle waa Fartuun
Ii waran caafimaadka maxaad sheegtay
Waa xamdi illaah macaanka maxaa ku helay miyaadan ogeyn in naf adiga ku sugeyso ay jirto maxaa loo waayey qoraaladaadii miyaad xanuunsantay meesha qabow ayaa laga sheegayey.
Wallaahi meeshaan dhibkeeda ayaa ay leedahay inkastoo aan xanuunsan hadana waxaad moodaa in ay I sii jiidaneyso.
Maxaan kala jeedaa in ay I sii jiidaneyso horta mala socotaa in bil guduhood loo baahan yahay in aad ku timaado ileyn 2 bilood waa ay kuu dhamaatay.
Fartuuney macaaney ma filaayo in aan ku imaan karo waayo dano badan oo aan halkaan ka leeyahay ayaa jira balse wax kasta oo igu soo kordha waan kula soo socon doonaa inshah Allah.
Ayaanloo armaada I illowdaa
Ma kula tahay in aan ku ilaawayo macaanta teeda kale lacagta waxba ha isku badin aniga ayaa ku soo wacaya.
Ok fariimaheyga ma heshay aan mailka kugu soo diray
Maalmahaan maba aan tagin xagga iyo Internetka balse manta ayaa aadayaa oo aan soo firinayaa ma mid qaas ayaa ku jirta.
Boholyowga aan dareemayo mid ka turjumeuso ayaa ku jirta waxaan filayaa in sideyda oo kale aan in badan ii xiistay sow sidaa maaha macaane.
Ayaanle oo hadalkeeda qaati ka taagan marqaankiina laga jejebinayo ayaa yiri
Waa sidaa macaanta haddii ay sidaa tahay iminkaan aadayaa midna waan kuu soo dirayaa.
Ayaanle hadalkii oo dhan ayaa u soo afjaray mana dooneynin in maalintiisa ay qaribto Ayaanle xilligii uu Soomaaliya joogay Jaadka waa uu la dhuuman jiray mana badsan jirin balse Kenya ayaa uu ku soo banaan baxay oo uu muqayil weyn ku noqday inta badan ma uusan furi jirin cinwaankiisa waxaana inta badan u soo bixin jiray Bille oo Xaafada ISlii ku lahaa Internetcafe.
Bile waa uu ka warhaayey in Ayaanle uusan daacad u aheyn gabadhaan sida waalan mailada u soo dirto balse manta waxaa soo jiitay warqadaan quruxda badan wuxuuna habeenkii Ayaanle ugu keenay gurigii uu ku qayilaayey waxaana dhexmartay hadaladaan.
Haye Bille waad soo dheeraataa ma warqad ayaad ii sitaa
Warqad waan kuu sidaayee mid aan ku weydiiyo saxiibow